Imigomo Nemibandela Yewebhusayithi
Le migomo nemibandela, kanye ne-Inqubomgomo Yobumfihlo, ilawula ukusetshenziswa kwakho kwewebsite yethu www.mh-chine.com (isayithi lethu / iwebhusayithi), kungakhathaliseki njengesimenywa noma umsebenzisi obhalisiwe. Sicela ufunde le migomo nemibandela ngokucophelela ngaphambi kokuqala ukusebenzisa isayithi. Ngokusebenzisa isayithi lethu, ubonisa ukuthi wamukela le migomo nemibandela futhi uyavuma ukuyilalela. Uma ungavumelani nale migomo nemibandela, sicela ubale ukusebenzisa isayithi lethu.
Uma unemibuzo mayelana nabo noma ungafisi ukwamukela, sicela uxhumane nobhala weNkampani yethu ku-86-574-27766888 ngaphambi kokusebenzisa lewebhusayithi.
Singashintsha le migomo nemibandela noma inqubomgomo yethu yobumfihlo nganoma isiphi isikhathi ngokubuyekeza leli khasi. Kufanele uhlole leli khasi ngezikhathi ezithile ukuze ubuyekeze le migomo nemibandela ukuqinisekisa ukuthi ujabule nganoma yiziphi izinguquko. Ukusebenzisa noma ukufinyelela kule website kubonisa ukwamukelwa kwalemigomo nemibandela. Uma ungamukeli le migomo nemibandela, sicela ungaqhubeki ukusebenzisa lewebhusayithi.
Ihhovisi lethu elikhulu li-#18 Ningnan North Road, Ningbo, China.
Ungathintana nathi ngocingo ku- + 86-574-27766888 noma ngokusebenzisa i-imeyili ku- .
Iwebhusayithi lapho le mibandela nemibandela isebenza khona nokuthi sinesibopho sini i-www.mh-chine.com.
Ukusebenzisa kwakho lewebhusayithi
Ukufinyelela kwisayithi yethu kuvunyelwe okwesikhashana, futhi sigcina ilungelo lokuhoxisa noma ukuchibiyela isevisi esiyinikezayo kwisayithi yethu ngaphandle kwesaziso. Ngeke sibe nesibopho uma nganoma yisiphi isizathu isayithi lethu alitholakali nganoma isiphi isikhathi noma nganoma yisiphi isikhathi.
Singavimbela ukufinyelela kwezinye izingxenye zesayithi lethu, noma indawo yethu yonke, kubasebenzisi ababhalisile nathi.
Amalungelo Okuphathwa Kwempahla
Lewebhusayithi kanye nazo zonke izinto eziqukethwe kuyo zivikelwe ngamalungelo okuthengisa impahla, kuhlanganise ne-copyright, futhi kungabakithi noma sinikezwe ilayisensi ukuba sisebenzise. Izinto ezifakiwe zihlanganisa, kodwa azikhawulelwanga, ukuklama, ukuhlelwa, ukubukeka, ukubukeka, ihluzo, izithombe, amavidiyo kanye nemibhalo kwiwebhusayithi, kanye nokunye okuqukethwe okunjengamanani entengo, izihloko, izindaba kanye nomunye umbhalo.
Awukwazi ukukopisha, ukusabalalisa kabusha, ukuphinda ushicilele noma ukwenza izinto ezikuleli website zibe khona kunoma ubani omunye ngaphandle kwemvume yethu ngokubhala.
Ungaphrinta noma ulande izinto ezivela kulewebhusayithi ngaphandle kokuthi:
• azikho izinto eziguqulwa nganoma iyiphi indlela;
• akukho ihluzo, izithombe noma ividiyo ezisetshenziselwa ngokuhlukile kombhalo ohambisana nawo;
• Izaziso zethu ze-copyright nezokuhweba zivela kuwo wonke amakhophi futhi uyavuma ukuthi le website ibe ngumthombo wendaba; futhi
• umuntu ohlinzeka ngalezi zinto ayenziwa ngalezi zimingcele.
Akumelwe usebenzise noma yikuphi ingxenye yezinto ezisetshenzisweni zethu ngenjongo yokuthengisa ngaphandle kokuthola ilayisensi yokwenza kanjalo kithi noma ngeyethu kusuka kulabo abanelayisenisi, uma kufanelekile.
Izicelo kanye nezinto zokuqeqesha
Isayithi lethu livumela ukufinyeleleka nokusetshenziswa kubalimi be-intanethi kufaka phakathi kodwa akukhawulelwe ku-Seamwork + ne-Coats Count (i- "App"). Ama-calculators ahlukahlukene anemisebenzi ehlukene futhi umsebenzisi kufanele asebenzise i-calculator ngokusekelwe kokukhipha okudingekayo komsebenzisi. Izibonelo zamakhono wokubala zihlanganisa ukulinganiswa kokusetshenziswa komcibisholo futhi ngaleyo ndlela kulinganiswa ngobuningi bezintambo nokuguqulwa kwezintambo nezintambo zokubala izintambo.
Ngaphezu kwalokho, isayithi lethu linikeza abasebenzisi ukufinyelela ekufundiseni izinto ("Izinto Zokuqeqesha") ezifaka kodwa ezingagcini ekuqeqesheni amavidiyo.
Kumele ufunde, wamukele futhi emva kwalokho uhambisane nale migomo ukuze usebenzise uhlelo lokusebenza nohlelo lokuqeqesha.
Ukuze usebenzise i-App kanye / noma Izinto Zokuqeqesha, sikunikeza ilayisensi yokusebenzisa i-App ne-Training Materials kuphela imisebenzi yakho yangaphakathi yebhizinisi. Leli layisensi linomuntu siqu futhi lilinganiselwe kuwe yedwa futhi ngaleyo ndlela ayinakudluliselwa.
Ngeke usakaze noma wenze uhlelo lokusebenza nohlelo lokuqeqesha olutholakale kunethiwekhi lapho lungasetshenziswa ngamadivaysi amaningi ngesikhathi esisodwa.
Awukwazi ukukopisha, ukuchitha phansi, ukubuyisela injini, ukuhlukanisa, ukuzama ukuthola ikhodi yomthombo, ukuguqula noma ukudala imisebenzi evela ku-App kanye / noma UkuThintwa kweMpahla noma iyiphi ingxenye yayo.
Ngokusebenzisa i-App ne-Training Materials, uyavuma futhi uyavuma ukuthi:
• I-App kanye / noma Izinto Zokuqeqesha zenzelwe ulwazi kuphela; futhi
• asenzeli iziqinisekiso noma ukuqinisekiswa mayelana nokuchithwa kolwazi oluqukethwe kwi-Materials Materials Training noma ulwazi olwenziwe yi-App. Ukusetshenziswa kwalolu hlelo lokusebenza futhi imiphumela evela kulo ihloselwe kuphela njengesiqondiso kuphela futhi ayifani nesipho, i-invoyisi, isimemo sokwelapha noma okufanayo.
Idatha yomuntu siqu
Uma sicubungula noma iyiphi imininingwane yomuntu egameni lakho lapho senza izibopho zethu ngaphansi kwalesi sivumelwano, sobabili sibhala izinhloso zethu ukuthi wena (noma umqashi wakho, uma kufanele) uzoba umlawuli wedatha futhi sizobe senziwa ngeprosesa yedatha futhi kunoma yiliphi icala :
• uyavuma futhi uyavuma ukuthi idatha yomuntu siqu, uma kudingeka, idluliselwe noma igcinwe ngaphandle kwe-European Economic Area noma izwe lapho ukhona khona, ukuze unikeze umsebenzi we-App kanye nezinye izibopho ngaphansi kwalesi sivumelwano;
• kufanele uqinisekise ukuthi unelungelo lokudlulisela imininingwane yomuntu efanele kithi ukuze sisebenzise ngokomthetho, senze futhi sithumele idatha yomuntu siqu ngokuhambisana nalesi sivumelwano egameni lakho;
• kufanele uqinisekise ukuthi noma yikuphi okwesithathu okumele ukwaziswa ngakho, futhi banikeze imvume yabo, ukusetshenziswa, ukucubungula nokudlulisa njengoba kudingwa yiwo wonke umthetho osebenzayo wokuvikela idatha;
• sizocubungula idatha yomuntu siqu kuphela ngokuvumelana nalesi sivumelwano, imigomo nemibandela kanye nenqubomgomo yobumfihlo kanye nanoma yimiphi imiyalo evumelekile enikezwa nguwe ngezikhathi ezithile; futhi
• sobabili sizothatha izinyathelo ezifanele zokwenza umsebenzi wezobuchwepheshe kanye nokuhlelwa kokunciphisa okungekho emthethweni noma okungekho emthethweni kwedatha yomuntu siqu noma ukulahlekelwa yengozi, ukubhujiswa noma umonakalo.
Isibopho sethu kuwe
Le migomo nemibandela ayifaki icala lethu (uma likhona) kuwe:
• ukulimala komuntu siqu noma ukufa okubangelwa ukunganaki kwethu;
• nanoma yiluphi udaba okungeke kube mthethweni ngathi ukukhipha noma ukuzama ukukhipha umthwalo wethu.
Asiqinisekisi ukuthi le website izokuhambisana nayo yonke noma iyiphi i-hardware ne-software ongayisebenzisa. Asiqinisekisi ukuthi le webhusayithi izotholakala sonke isikhathi noma ngasiphi isikhathi esithile. Sigcina ilungelo lokuhoxisa noma ukuguqula le website nganoma yisiphi isikhathi.
Asicabangi nanoma yiluphi uhlobo lwezinhlobo ezivela ekusebenziseni, noma ukuthembela kunoma yiluphi ulwazi, impahla noma inqubo equkethwe kusayithi.
Asenza iziqinisekiso ngokubambisana nesayithi, noma izinto eziqukethwe kuwo, futhi asizibopheli ezinye izibopho ngaphandle kwalezo ezibekiwe kule migomo nemibandela kanye nenqubomgomo yethu yobumfihlo.
Izinto ezikhonjiswe kusayithi lethu zinikezwa ngaphandle kwemibandela, izimo noma iziqinisekiso mayelana nokunemba kwayo. Ngezinga elivunyelwe ngumthetho, thina, amanye amalunga eqembu lethu lezinkampani kanye nabantu abathintekayo abathintekayo kithi asikhipha ngokucacile:
• zonke izimo, iziqinisekiso kanye neminye imigomo engase ishiwo ngomthetho, umthetho ovamile noma umthetho wokulingana.
Noma yimuphi umthwalo kunoma yikuphi:
• ngokuqondile; noma
• Ukulahlekelwa okungaqondile noma okulandelanayo noma umonakalo owenziwe yinoma yimuphi umsebenzisi ngokuphathelene nesayithi lethu noma ngokuphathelene nokusetshenziswa, ukungakwazi ukusebenzisa, noma imiphumela yokusebenzisa isayithi lethu, noma yikuphi amawebhusayithi axhumene nayo nanoma yiziphi izinto ezithunyelwe kulo, kufaka phakathi, ngaphandle kokunciphisa noma yikuphi umthwalo we:
• ukulahlekelwa kwemali engenayo noma imali engenayo;
• ukulahlekelwa kwebhizinisi;
• ukulahlekelwa kwezinzuzo noma izinkontileka;
• ukulahlekelwa kokulondolozwa okulindelwe;
• ukulahlekelwa kwedatha;
• ukulahlekelwa okuhle;
• ukuphathwa okulahlekile noma isikhathi sehhovisi; kanye nanoma yikuphi ukulahlekelwa noma ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo, noma yikuphi okuvela futhi okubangelwa ukuphulwa (noma ukukhohlisa) (kufaka ukunganaki), ukwephulwa kwenkontileka noma okunye, ngisho noma kungabonakala, uma nje le mibandela ingavimbeli izimangalo zokulahlekelwa noma ukulimala endaweni yakho ebonakalayo noma nanoma yiziphi ezinye izimangalo zokulahlekelwa ngokuqondile kwezezimali ezingekho ngaphandle kwanoma yiziphi izigaba ezibekwe ngenhla. Lokhu akuthinti ukuma kwethu kokufa noma ukulimala komuntu siqu ngenxa yokunganakwa kwethu, noma icala lethu lokukhwabanisa, ukwephulwa okungekho emthethweni noma ukwephulwa kabi ngokuphathelene nodaba oluyisisekelo, nanoma yikuphi omunye umthwalo ongenakukhishwa noma ukulinganiselwe ngaphansi komthetho osebenzayo.
Ukwaziswa ngawe nokuvakashela kusayithi lethu
Sisebenzisa ulwazi mayelana nawe ngokuhambisana nenqubomgomo yethu yobumfihlo. Ngokusebenzisa isayithi lethu, uyavuma ukucubungula okunjalo futhi uqinisekisa ukuthi yonke idatha enikeziwe nguwe inembile.
Ulwazi kule website
Ngaphandle kokuthi ulwazi lwalolu shicilelo lugcinwe (kubandakanya, ngaphandle kwemikhakha yemininingwane kanye nemininingwane yamanani), lonke ulwazi oluqukethwe kule website lunikezwa ngolwazi jikelele kanye nezinhloso zentshisekelo kuphela. Ngenkathi sizama futhi siqinisekise ukuthi ulwazi oluqukethwe kwiwebsite lulungile futhi lusesikhathini, asikwazi ukubhekana nanoma yikuphi ukungalungi kolwazi. Ngenxa yalokho, akufanele uthembele kulolu lwazi, futhi sincoma ukuthi uthathe iseluleko esengeziwe noma ufune isiqondiso esengeziwe ngaphambi kokuthatha noma yisiphi isenzo ngokuya kolwazi oluqukethwe kule website. Isibopho sethu kuwe njengoba sichazwe ngenhla asithinteki ngalokhu.
Singase sixhumanise namanye amawebhusayithi angekho ngaphansi kokulawula kwethu. Asisibophezele lawa mawebhusayithi nganoma iyiphi indlela, futhi ungawavumeli. Kungumthwalo wakho ukuhlola imigomo nemibandela kanye nenqubomgomo yobumfihlo kunoma iyiphi enye iwebhusayithi oyivakashelayo.
Ngeke uxhumanise kulewebhusayithi kusuka kwenye iwebhusayithi ngaphandle kokuthi uhambisane nemikhombandlela elandelayo:
• Izixhumanisi kufanele zibe ekhasini eliyisiqalo lewebhusayithi ku-www.mh-chine.com;
• angeke udale ifreyimu noma yimuphi omunye umngcele oseduze newebhusayithi;
• isayithi ofuna ukuxhumanisa kumele sihambisane nayo yonke imithetho nemithethonqubo efanele futhi akufanele iqukathe okuqukethwe okungabhekwa njengokuphazamiseka noma okucasulayo; futhi
• Akufanele usho ukuthi siyavuma noma sihlobene nanoma yimuphi omunye iwebhusayithi, umkhiqizo noma isevisi.
Okunye ngaphandle kwemigomo yokuthengisa ye-intanethi nemibandela eyimemo yokwelapha (hhayi ukunikezwa), akukho lutho kulokhu kuwebhusayithi okuhloswe ukuba kube khona futhi akufanele kuthathwe njengokunikezwa kokungena ebuhlotsheni obuseduze nawe noma omunye umuntu ngaphandle kwalezi imigomo nemibandela elawula ubuhlobo phakathi kwethu maqondana nokusebenzisa kwakho iwebhusayithi.
Uma wenza inkontileka nomuntu wesithathu obizwa noma okhonjisiwe kulolu sayithi, kungumthwalo wakho ukuqinisekisa ukuthi ukhululekile ngemigomo yalowo mkontanethi futhi uthatha iseluleko somthetho uma kunesidingo.
Ama-Viruses, ukuHlangela kanye nezinye izinsolo
Akumelwe usebenzise kabi isayithi lethu ngokuzisa ngokufaka amagciwane, iTrojans, izibungu, amabhomu womqondo noma ezinye izinto ezilimazayo noma ezibucayi. Akumelwe uzame ukuthola ukufinyelela okungagunyaziwe kusayithi lethu, iseva lapho isayithi lethu ligcinwa khona noma kunoma iyiphi iseva, ikhompyutha noma i-database exhunywe kusayithi lethu. Akumelwe uhlasele isayithi lethu ngokunamathisela okuphikisayo kokusebenza noma ukuhlaselwa kwenkonzo yokuphika.
Ngokuphula leli lungiselelo, uzobe wenza icala lobugebengu ngaphansi kwe-Computer Misuse Act 1990. Sizobika noma yikuphi ukuphulwa okunjalo kulabo abaphethe iziphathimandla ezifanele futhi sizosebenzisana nalawo magunya ngokudalula ubunikazi bakho kubo. Uma kwenzeka ukuphulwa okunjalo, ilungelo lakho lokusebenzisa isayithi lethu lizophela ngokushesha.
Ngeke sibe nesibopho nganoma yikuphi ukulahlekelwa noma ukulimala okubangelwa ukuxhaswa kokunikezwa kwenkonzo okuphasisiwe, amagciwane noma ezinye izinto ezibucayi zobuchwepheshe ezingathinta imishini yakho yekhompiyutha, izinhlelo zekhompyutha, idatha noma ezinye izinto zokuthengisa ngenxa yokusebenzisa kwakho isayithi noma ekulayisheni kwakho noma yikuphi okuthunyelwe okuthunyelwe kuyo, noma kunoma iyiphi iwebhusayithi exhunywe kuyo.
UMthetho Obusayo noMthetho
Ukwakheka, ubukhona, ukwakhiwa, ukusebenza, ukuqinisekiswa kwazo zonke izici noma yiziphi lezi zimiso nemibandela noma yimuphi umgomo wale migomo nemibandela kuzolawulwa umthetho waseChina.
Amakhotho aseShayina ayoba negunya elikhethekile lokuxazulula izingxabano ezingase zivele noma ngokuphathelene nale migomo nemibandela noma ukusetshenziswa kwewebhusayithi.
Ikhaya Ikhaya Izigaba - Ukutadisha --Zizi - I-Ribbon ne-Tape - Amaphuzu - Izikhala - Izinkinobho --Ukufakazela --Tassel & Fringe / Ukunciphisa - Ukusekela Izinto Zokusebenza - Izigaba & Izesekeli --Umshini Wokuhlola & Izingxenye --Fabric - Abanye Inkampani - Ukubuka kwe-MH - UMH Industrial --- Izindwangu Zomshini --- I-Ribbon & Amathebula WeTape --- Laces Factories - Umlando weMH - Bonisa imibukiso --Imigomo yeGalleries - Ividiyo yevidiyo Xhumana nathi Indawo Yendawo --Feedback Community --Sijoyine